Ndakaramba ndichiwedzera kumuisa nerurimi apa ndichirumirira! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakaramba ndichiwedzera kumuisa nerurimi apa ndichirumirira!
Kate ainge anaka nekushanda kwaaiyita to add to her pleasures, ndaitambisa rurimi rwangu mukati mebeche rake ndikanzwa achiita kuridza kamhere apa ndichinanzva juice dzese dzaibuda mubeche rake.It was one of those usual Sundays makuseni ndikamutswa netuvana twaiyita noise vachitamba bhora panze and ndakatarisa nguva ndiwone it’s 8am, ndainge ndava mulast year of college.
Sunday ndiro raive day randaizorora semunhu aigara nemabhuku all week and ndakakanganiswa nekutamba kwaiyita vapfanha ava bhora vachirova window rangu. Ndakamuka ndikawona foni yangu ine ma notifications from the class representative and mamwe from girlfriend yangu, Mpumi tainge tatova ne 3 years tichidanana after ndainge ndasangana naye through a mutual friend and ndaimuda zvokuti.
Like every couple tine ma ups and downs edu but chinonakidza pane zvese izvi is the make up part, kana tanetsana in a few hours tazvivharira mubedroom tinenge takanganwa everything.Tinodanana asi nyaya iyi takes our trust kune imwe level ine sister yaMpumi , Kate. Regai tidzokere kumakuseni aya eSunday after ndawona message ndakamufonera zvikanzi babe huya unditore tiyende ku Bela Bela somewhere kumakomo just to relax tisina cellphone reception.
Ndakavhunduka nema plans ainge ari so sudden zvikanzi my sister Kate arikuuya nesu ndane time ndisati ndamuwona so she suggested we drive out of time, still ndakasara ndine mubvunzo ndikati kwakanaka here zvikanzi tichataura takuyenda ndikangoti horaiti babe ko ndainge ndisina hangu plans for anything the next 3 days kana chikoro ndainge ndiri off.
Ndakageza and 10 minutes ndainge ndapedza ndokutora Armani Code Deodorant Body Spray kuti ndinhuwirirewo ndokuisa futi ka after shave ke Gillette and then ndokupfeka smart casual ndokuudza vabereki vangu kuti ndakuyenda out with a college friend ndozodzoka magwana or the next day, vakangoti horaiti ko ndainge ndakura painge pasina reason yekuti No.
Pasina 10 minutes ndainge ndasvika kumba kwana Mpumi vachibva vabuda vese nesister yake Kate, sister yake was 4 years older than musikana wangu but vainge vane body yakada kufanana and the height yavo was the same, vaitoita kunge ma twin sisters.Mpumi akandikisa padama paakapinda mumota and Kate gave me a hi-five tichibva tatanga rwendo rwedu ndichiridza have soft music yaifarirwa nemusikana wangu.
Ndakayenda kuroom ndikasvika ndichinoka zvikanzi ndiyani, ndakapindura zvikanzi pinda ubva wavhara ukiye door, ndichipinda so ndakawona neka corner keziso munhu akapfeka bhurugwa nebraa zveblack akarara pabed ndikanzwa mboro yangu yakuita kakumira. Akasimuka pabed ndokuuya pandiri ndokutanga kundikisa ndichinzwa flavor ye spearmint and ndaitadza kumira kumukisa nekunakirwa. Ndakamira kumukisa ndokubva ndadzika kuyenda pahuro haaa masasi kuita kunge sister yake chaiyo vese vanonakirwa nekukiswa muhuro, ndainge ndakufunga manje kuti kana Kate achiita so ko ukazosvira manje zvakafanana here nesvinoitwa na Mpumi.
Ndakatanga kumukisa kumusana ndiwone same reaction neya sister vake, ndokutanga kukisa muviri wake wese ndinzwe munhu akuchemerera ndokubva ndabvisa braaaa rake in the process ndichibva ndamutendudza kuti anditarise aaahhh zamu rainge rakamira kuti twiiiii kuita kunge rekavirgin chaiko apa minyatso yake yainge iri pink. Minyatso yake yainge yamira nezemo and inini handina kunonoka ndakabva ndatanga kuyamwa mazamu ake, ndaiti ndichiyamwa one rimwe ndichitambisa neruoko ndikanzwa munhu akuti ndiyamwe rimwe zamu rake ndikanzwa kakuchemerera nekavoice kari pasi ndokubva atanga kuvhura zip yangu achibva adhonzera pant rangu pasi.
Mboro yangu yainge yamira kare, Kate akaibata achiyedza kuisa yese mumuromo make but yainge yakakurisa zvekuti yaimudzipa but akatanga kutambisa rurimi rwake chete pamusoro wemboro ndikaita kunge munhu abatwa nemagetsi zvekuti ndainge ndakutonzwa kuda kutunda zvikanzi tundira hako pamazamu angu ndokubva ndayita kuputika chaiko apa huronyo hwacho hwainge hwakawanda kuita kunge munhu ainge ane 3 months chaidzo asati asvira apa kukora kwacho hhhaaaaa ma1 chaiwo. Kate akasimuka ndokuyenda kubathroom kunogeza maspemu ainge azara pamazamu ake, ndakamutevera ndokudongorera zvaaiyita ndikawona munhu ayenda pashower apedza ndokupfeka rimwe bhurugwa apa ainge asiya ati ndirikudzoka for real action.
Handina kumirira kuti abude ndokubva ndavhura door ndokutanga kumikisa everywhere futi apa ndichibata mazamu ake kusvikira ndasvika pabeche ndikanzwa munhu ayita kakufemuruka apa ainge atota kare kuita kunge haasiriye abva kugeza nekupukuta beche rake. Sisi vake vaiziva kuti ndinofarira kutamba nebeche risina kugerwa ndokubva ndaseka hangu ndichifunga kuti vanhu ava vainge vazvironga rinhi.
Kate ainge atopera basa kare nezemo but ndakaramba ndicchitamba naye ndokubva ndatanga kuisa rurimi rwanu mukati mebeche rake ndikanzwa kakuchemerera kaye kava strong. Ndakaramba ndichiwedzera kuisa nerurimi apa ndichirumirira matinji, ndakamira ndokubva ndaisa zvigunwe two mukati mebeche ndichikoira zvekuti munhu akatanga kuita kunge arohwa nemagetsi achigwinha gwinha ndokutubva atunda zvekutotesa masheets nekunakirwa apa achiideedza zita rangu, ndakabva ndaita manyemwe.
Ndakamutakura ndokubva ndamuisa pabed, ndainge ndisina kondom but kuti ndimire apa zvainge zvisingaite asi ndakamuudza kuti handina kondom zvikanzi isa hako ndirikunwa mapills. Handina kuzotora nguva ndokubva ndabairira mboro yangu mubeche rake raidziya ndokutanga kukoira gently, ndaiyita missionary ndokuwedzera speed iyewo achiwedzera kuchemerera. After a few minutes ndakabva ndaregedzera load yese mukati mebeche rake ndokubva ndarara paside pake apa tese tainge tatundirana at the same time. Takazoyenda kunodya after Kate ndokutanga kutaura kunakirwa kwaainge ayita but ndakawona kuti sister yake Mpumi yainge isingade kuzvinzwa and I understand she can help sisi vake but kuti anzwe zvainge zvaitika was too much. Kate akabva ati ndirikuda kusvirwa futi nhasi manheru, Mpumi akabva ati saka tichaita 3some since inini ndirikuda kusvirwawo nhasi manheru.
Previous articleNdakanzwa ropa kumhanya muviri wese apa kuzasi kuchinyerekedza!
Next articleNdirikunzwa kuda murume anondiisa zviri hard asingakurumidze kutunda!